नेपालीहरु बंगाली, भुटानी र पाकिस्तानी जस्ता होईनन्, मोदिलाई गोर्खालीको पावर थाहा छैन ! किन कसो ? - Darshan Nepal News
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालीहरु बंगाली, भुटानी र पाकिस्तानी जस्ता होईनन्, मोदिलाई गोर्खालीको पावर थाहा छैन ! किन कसो ?
भारतीयसँग बिहे गरेका नेपाली चेलीले चुनाव लड्न र भोट हाल्न म दिन्न : मोदि